Jo Stodgel: umhlaba hero | Ecobricks.org
Jo Stodgel: umhlaba hero
by Candiwrapper | Sep 20, 2018
2017 Ecobricker Umhlaba Hero
UJo wasungulwa ukuthi umngane ongazange abize ngokuthi i-Ecobrick. Kumngane wakhe kwakuyisixazululo esihle sokubuyisela emuva-kunokuba ashicilele ipulasitiki yakhe ekukhuphukeni, wayezoyifaka ebhodleleni leplastiki. Lo mqondo olula kwakuwukushintsha impilo kaJo kuze kube phakade. UJob wabona ukuthi kungenzeka ukuthatha umthwalo wemfucuza yomuntu siqu futhi uyiguqule. Kwakuyisinyathelo sokuqala ohambweni oluzomthatha, kanye ne-ecobricks, ukusuka emzini wakhe waseNew Mexico, waya e-Afrika futhi abuyele emuva.
UJo uyathanda imvelo. Udonsa ugqozi kuwo futhi uzohlala ngesikhathi esiphelele sasendle uma kungekhona kuzo zonke izinkinga abantu abazenzayo kulezi zinsuku. Ipulasitiki, kungakhathaliseki ukuthi idiliza izidlova ezinhle kakhulu zendlu yakhe yaseSanta Fe, noma ifaka emgodini waseNingizimu Afrika, sekuyisikhathi eside idonsa izinhliziyo zikaJo.
UJo ungumculi, ogcwele ubuhlakani kanye nogqozi. Mhlawumbe yilokho okwamsiza ukuba abone ibhodlela leplastiki ngendlela abanye abaningi abangenakukwazi ngayo. Esikhundleni sento okumele ayigodle, waqiniseka ukuthi yayinamandla okujula, angaphili, ukuxazulula ukungcola kweplastiki.
Ngesikhathi eqedela i-Holistic Science Masters degree eSikoleni SaseSchumacher ngo-2012 waqala umsebenzi wezinyanga ezintathu eNingizimu Afrika. Ezweni lapho iningi lala madoti lishiswa, ligcwele noma ligcwele umhlaba, kukhona ukungcola kwepulasitiki yonke indawo. Inkinga yayicacile. Kwakusobala ukuthi idolobha nezwe alinaso isisombululo sepulasitiki.
Noma kunjalo, abantu babe nezixazululo! Emzaneni omncane waseGreytown, uJo wathola izindlela eziningi abamakhelwane bakhe ababezihlose kabusha ekuhloseni “imfucuza” yabo. Kwakungumongo ophelele ukwethula u-Ecobricking. Ihambelana ngqo nokuguqulwa kodoti okwase kuvele. Ukugubha yonke into emisha yasendaweni yakhona waphonsa iqembu ku-Greytown dumpsite yendawo. Wamema bonke abangane bakhe, nabangane babo, ukuba babonise imibono eqhubekayo ukugqugquzela umphakathi ukuba ucabange kabili mayelana nezinto zabo zokudoba kanye nokukwazi kwabo. Abaculi nabaculi bajoyina. Kwakuyi-explosive epic.
Iqembu, manje eyaziwa ngokuthi Trash to Treasure Festival, seliba umcimbi waminyaka yonke.
Kuzo ‘Trash to Treasure Festivals’, izakhiwo zakhiwe nge-ecobricks, amathayi, nokuningi. Umsebenzi omuhle wezobuciko kanye nobuciko obusebenzayo nakho konke-okuyisibonelo esihle kakhulu sezixazululo zomphakathi nezakhamuzi eziye zachitha isikhathi. Lokhu kucabangela kuye kwaba nomthelela omkhulu eGreytown kangangokuba kuze kube namuhla izikole ze-écobrick, zakha futhi ziqhubeke nokusebenzisa imiqondo yokulahlekelwa yilapho.
Lapho uJo ebuyela ekhaya lakhe laseSanta Fe, wabona ukuthi i-Ecobricks yayingeyona nje i-Afrika kuphela.
UJo wazi kahle ukuthi naphezu kwezinhloso ezinhle zomakhelwane bakhe, kanye nemizamo emihle kamasipala wakhe, kwakungekho izixazululo ezinhle zepulasitiki ngisho naseMelika! Nakuba, izitaladi nezindlela zomgwaqo zendlu yakhe kwakungenalutho, lokhu akusho ukuthi ipulasitiki ixazululwe. Njengoba ecwaninga, evame ukumba ama-dumpsites ngokwakhe, waqaphela ukuthi e-Santa Fe ipulasitiki yayifihliwe kangcono-uhlelo olusebenzayo lwalukhona ukuze luyithumele emafayibhalini anobuthi noma luthumele kwamanye amazwe. U-Jo uqaphela ukuthi esinye sezizathu eziyinhloko abantu baseSanta Fe baqhubeka bebenzisa ipulasitiki ngenxa yokuthi babengazi ukuthi kwakungekho ikhambi elihle! Ezimisele ukwenza okuthile ngalokhu endlini yakhe, wabeka inhlangano yakhe: Upcycle Santa Fe. Njengoba uJo ethi “Lapha ku-Upcycle Santa Fe sikholelwa ukuthi abantu bayakwazi izinto ezinhle, njengokuhlanza ngemuva kwabo.”
I-Upcycle Santa Fe igxila ekuguquleni izinhlelo ezimazayo zokuphathwa kwezinkunkuma zibe yizinzuzo. Ukugxila kuJo yizemfundo. Ukuxazulula inkinga, abantu kuqala kudingeka baqaphele ukuthi kukhona okunye. UJo uye wasebenza nabaningi emphakathini wakubo ukuhlanza imifula kanye nezindawo zendawo, ukuqoqa okungewona ama-recyclables emabhizinisini, ukwakha izakhiwo zemfundo nokufundisa ezikoleni. Muva nje, uJo wabambisana neLos Alamos Research Institute futhi wenza ucwaningo olubalulekile emphakathini womhlaba wonke we-ecobrick ekuphepha kokwakhiwa nge-ecobricks. UJo ekugcineni uzofika esiqhingini esihle endaweni ethile (ukuthi mhlawumbe uyakha nge-ecobricks!), Kodwa manje sithokozela ukuthi sibheke ukukhathazeka kwezemvelo emhlabeni wonke, futhi kungcono kakhulu, endaweni yaseSanta Fe, eNew Mexico.
Jo Stodgel | Santa Fe, NM, USA
“E-America, singase sithole izinto eziningi zokuvuselela kabusha, kodwa lokho akusho ukuthi ipulasitiki iyahamba.” UJo ubelokhu ekhuthele ukugubha ipulasitiki yakhe eminyakeni emihlanu edlule. UJo uhola u-Ecobrick ukuqeqesha eMelika nase-Afrika.